Best Neumark mgbanwe
Best Buy price Neumark $ 0.141989 NEU/USDT Fatbtc
Ahịa ahia kacha mma Neumark $ 0.150000 NEU/USD BitBay
Ihe kachasị mma Neumark ekpebisiri site na nsonaazụ nke ụzọ abụọ ego ego na mgbanwe. Neumark ọnụ ahịa mgbanwe ego ego na-ekpebi ọnụego mgbanwe. O dabere n’onyinye ma choro crypto a. Mgbanwe crypto dị iche iche nwere oke azụmaahịa azụmaahịa. Enwere ike ịchọta ọnụego Neumark site na nyochawa ọnụego mgbanwe nke mgbanwe ego ego ego niile ma họrọ nke kachasị mma.
Best Neumark obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta Neumark na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Neumark na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ kachasị mma Neumark bụ ezigbo echiche dịịrị onye nwe ego ego ọ bụla. Mpempe akwụkwọ Crypto bụ mmemme maka ịchekwa ego ego yana ịme ego na ịkwụ ụgwọ maka crypto a. Ejiri akpa kacha mma Neumark jiri akara ngosi nke nchekwa na ntụkwasị obi kacha mma. Enwere ike ikpebi ntụgharị kachasị mma Neumark n'oge ọ bụla dabere na nsonaazụ nke azụmaahịa zuru ezu maka ịzụta na ire nke ego ego.
Ụlọ ahịa Neumark kacha mma
Ọnụ ego kachasị mma maka ịzụrụ, ire ego ego Neumark na 28/05/2020 taa anyị gosipụtara tebụl ndị dị n'elu maka ịdị mfe nghọta. Na tebụl a, ebe egosiri na Neumark ego ego ego, ị nwere ike ịhụ nke ọma ọnụahịa nke Neumark na nyochaa nke kachasị mma. N'ihi nke a, họrọ nke ị ga - eji agbanwee mgbanwe kacha mma. Ihe ndekọ ntanetị "Kasị mma Neumark maka taa 28/05/2020" na-enyocha ọnụego ego ego kachasị mma na ntanetị. Ọnụ ego kachasị mma Neumark - gbanwere na dollar, maka ịdị mfe ntụnyere na ọnụego sitere na isi mmalite ndị ọzọ.
USDT ETH USD EUR
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Neumark nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
BitBay NEU/EUR $ 0.14 $ 6 -
BitBay NEU/USD $ 0.15 - -
Fatbtc NEU/USDT $ 0.14 $ 3 798 -
IDEX NEU/ETH $ 0.14 - -
A na-edobe ọnụego ịzụta kacha mma Neumark mgbe ịzụrụ ego na-abụghị ọkọlọtọ ma ọ bụ ego ego ndị ọzọ. E gosipụtara ọnụego ịzụta kacha mma Neumark na dollar ka enwere ike ịkwụ ọnụ ya n'ụzọ ziri ezi. Anyị na-egosikwa ụdị ego a ga-eji zụta Neumark. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa crypto kacha mma e nwere njikọ nke gbanwere ebe a na-ere Neumark na ọnụahịa a kachasị mma.
Ulo ahia “uzo abuo” gosiputara ego nke enwere ike ree Neumark. A na-ahazi ngosipụta mgbanwe site na ọnụego mgbanwe kacha mma maka ire na ịzụ Neumark. Egosipụtara ọnụego a na dọla US. Nwere ike iji nzacha nke ego dị iche iche. Ọ dị n'elu tebụl nke mgbanwe crypto kacha mma. A na-emelite ozi gbasara mgbanwe kacha mma maka ịzụrụ na ire Neumark n'ịntanetị ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile.